MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-04-14
2013 April (19) ya shani hkying (1:00)pm aten ram kaw nna shana hkying (4:30)pm aten ram du hkra KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (27) Dap Dung makawp maga ginra maga de htu shadut lung wa ai Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (129) dap na hpyen hpung ni hpe KIA Masat (27) Dap Dung na hpyen hpung ni Manau Bum Lagaw kaw ninghkap gasat poi byin ai lam hpe chye lu ai.
at 4/20/2013 12:03:00 AM No comments:
at 4/19/2013 11:56:00 PM No comments:
at 4/19/2013 11:55:00 PM No comments:
at 4/19/2013 07:52:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အုပ်ချုပ်နယ်မြေ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေဖြစ်သော ဆတ်ခုန်းချောင်အနီးတွင် ဗိုလ်ကြီး လဟုန်ဒိုင်ဇောင်း ဦးဆောင်သော တပ်ရင်း (၁၇) မှ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ ဧပရယ် (၁၈) ရက်နေ့တွင် တစ်နေကုန် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 4/19/2013 02:43:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ (၄) လက်အောက် တပ်ရင်း (၉)၊ နယ်မြေဖြစ်သော မုန်းလီတောင် အနီး မန်ဂျပ် ကျေးရွာတွင် ဗမာစစ်တပ်များနှင့် တပ်ခွဲ (၃) မှ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ဧပရယ် (၁၇) ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
at 4/19/2013 02:39:00 PM No comments:
KIA Masat (5) Dap Ba, Masat (3) Dap Dung makawp maga ginra de htim gasat shamu shamawt hkawm nga ai M.P.Hk npu na Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (21) kata na hpyen hpung ni gaw 2013 April (15) yajahpawt hkying (7:30)am ahte ram hta Wu Htau hpa hka sun kawng kaw nna KIA Masat (3) Dap Dung na Mung Shawa Hpyen Hpung (MHH) ni shara la nga ai Law Hkum Post maga de Sinat Kaba 81MM hte gap sharu bun ai lam hpe chye lu ai.
at 4/19/2013 02:34:00 PM No comments:
at 4/19/2013 02:17:00 PM No comments:
at 4/18/2013 07:38:00 PM No comments:
at 4/18/2013 07:30:00 PM No comments:
at 4/18/2013 07:26:00 PM No comments:
at 4/18/2013 07:24:00 PM No comments:
at 4/17/2013 06:32:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် လိုင်ဇာမြို့ နောင်အေခူး (Nawng E Hku) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဥပဒေရေးရာ သင်တန်းကို စစ်ရှောင်စခန်းရှိ ခရစ်ယာန်ဆရာ/မ များအား ဥပဒေအရာရှိများက ပို့ချပေးနေသည်။
ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့ထိ လိုင်ဇာဝန်းကျင်စစ်ရှောင်စခန်းများမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာနှင့်ဆရာမ များအားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေး တာဝန်ခံဆရာအောင်ရာ ကပြောသည်။
at 4/17/2013 05:46:00 PM No comments:
ကျွန်တော်က ရွာတစ်ခုမှာ လူလား မြောက်ခဲ့တဲ့ကောင်၊ အဖေက မရှိတော့ဘူး။ အမေရယ်၊ ညီ ၂ ယောက်နဲ့ ညီမ တစ်ယောက် ရှိတယ်။ တောမှာ နေပြီး လယ်လုပ်၊ စပါးထမ်း ထမင်းဝ ပေမယ့် မြို့တက်ပြီး အလုပ် လုပ်ချင်လို့ အသိဆိုင်မှာ စားပွဲထိုး ၀င်လုပ်တယ်။ စစ်သားတွေနဲ့ မိတ်ဆွေ ဖြစ်တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း စစ်သား ဖြစ်သွားတယ်။
ရဲဘော်သစ် သင်တန်း၊ လယ်လုပ် စပါးထမ်း လာတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် အဲလောက် မခက်ခဲဘူး။ ဇွန်းခရင်းနဲ့ ထမင်းစား ခိုင်းတာကို စိတ်အညစ် ဆုံးပဲ။ အဲဒီတော့ လစ်ရင် လက်နဲ့ စားတယ်။ ဆရာကြီးတွေ၊ အရာရှိတွေ ရှေ့ကျရင် ဇွန်းခရင်းနဲ့ စားတယ်။ ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ စစ်ရေးပြနဲ့ လက်ချောင်းလေး ကွေးရင် ကျည်ဆံ ထွက်တာ၊ သေနတ် ဖြုတ်တာ၊ တပ်တာကို ကျွန်တော် တတ်ခဲ့တယ်။ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် ဒို့တာဝန် အရေး (၃) ပါးတွေ၊ နိုင်ငံတော် ကြီးကို ကာကွယ် တာတွေကို ကျွန်တော် အဲလောက် စိတ်မ၀င်စား ခဲ့တာတော့ အမှန် ပါပဲ။
at 4/17/2013 10:44:00 AM No comments:
မြစ်ကြီးနားအထက် ၁၀ မိုင်အကွာ လမြန်ကျေးရွာ မလိခ (ဧရာဝတီ) မြစ်ကမ်း။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ အထက် ၁၀ မိုင်အကွာရှိ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းစပ်တလျှောက်မှ သဲကျောက်များကို ရွာလူကြီး၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လေလံဆွဲ တူးဖော် ရောင်းချနေရာ ဒေသခံများ၏ ခြံအနီးသို့ရောက်လာသောကြောင့် ဒေသခံများက မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသည်။
at 4/17/2013 10:39:00 AM No comments:
2013 April (15-18) ya shani du hkra Laiza Muklum, Nawng E Hku Buga Hkalup Hpung nawku jawng wang hta Ninghpawt Ninghpang Gaw Da Ai Tara (Upade) hte seng nna sharin hpawng galaw ai lam hpe chye lu ai.
Ndai sharin hpawng hta Hpyenyen Dabang shagu na mu gun salang ni hte Laiza Ginwang kata na mung shawa ni hpe Ningpawt ninghpang gaw da ai tara kanu (Upade) hte seng nna hpungjat hpaji jaw ai sharin hpawng re hpe chye lu ai.
at 4/16/2013 09:24:00 PM No comments:
at 4/14/2013 08:31:00 PM No comments:
လိုင်ဇာမြို့တွင် နှစ်သစ် ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ယနေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့မှစတင်ပြီး ၃ ရက်ကြာ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
လိုင်ဇာမြို့တော်ဝန်က ကမကထ ပြုလုပ်ကာ ကျင်းပသော ပွဲတော်တွင် လာရောက် ရေပက်ကစားသူများကို အလှူရှင်များက
ဒန်ပေါက် ကြာဆံဟင်းခါး ထမင်းနှင့်ဟင်းများဖြင့် ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပြီး စတိတ်ရှိုးများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
မဏ္ဍပ်ကို လိုင်ဇာမြို့အ၀င် လေ့ကျင့်ရေး ဂေါက်ကွင်းတွင် ပြုလုပ်ထားသည်။
သင်္ကြန်ရေပက်သည့်အခါ ချောင်းရေနှင့် မပက်ဘဲ တောင်ကျရေနှင့် ပက်မည်ဖြစ်သည်။
at 4/14/2013 01:18:00 PM No comments: